Humna nageenya booressuuf socha’u kamuufu bulchiinsi magaalichaa hin obsu-Injinaar Taakkalaa – Fana Broadcasting Corporate
Humna nageenya booressuuf socha’u kamuufu bulchiinsi magaalichaa hin obsu-Injinaar Taakkalaa
Finfinnee, Fulbaana 4,2011 (FBC)-Ummata fi ummata walitti buusufi nageenya magaalichaa booressuuf humna socha’u kamuu bulchiinsi magaalichaa kan hin obsine ta’uu Itti Aanan Kantiibaa magaala Finfinnee Injinaar Taakkalaa Uumaa beeksisaniiru.
Itti Aanaan Kantiibaa Injinaar Taakkalaa Uumaa simannaa boru hoggantoota ABO’f taasifamu rakkoo nageenyaa malee akka goolabamuuf ibsa qophii haal- duree kennaniiru.
Kanaan dura jiraattootni magaalichaa dhaabbilee siyaasaa fi gareewwan karaa nagaan simachaa akkuma turan hoggantoota ABO miira obbolummaa fi tasgabbiin akka simatan gaafataniiru.
Simannaa fi alaabaa sabaaba godhachuun ummata gidduutti walitti bu’iinsa hin malle kanneen uumuf socha’an bulchiinsi magaalichaa tarkaanfii seeraa irratti kan fudhatu ta’uu ibsaniiru.
Jiraattootni magaala Finfinnee obbooleewwan isaanii hoggantoota ABO simachuuf naannoo Oromiyaa irraa dhufan jaalalaan simachuu akka qaban waamicha dabarsaniiru.
Simannaan kun nagaan akka xumuramuuf jiraattootni magaala Finfinnee gahee isaan irraa eeggamu akka bahatan Injinaar Taakkalaan gaafataniiru.
Dabalataanis Injinaar Taakkalaa Uumaa Qeerroo fi dargaggoota magaala Finfinnee waliin kan mari’atan yoo ta’u,dargaggoonni waldhabbee uumaame furuun obbolummaa isaanii akka cimsachuu qaban hubachiisaniiru.